धरानमा एक दिन विराएर मात्र खानेपानी वितरण
प्रकाशित: माघ १०, २०७८ / 2,080 पटक पढिएको
धरान: धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले एक दिन विराएर मात्र पानी वितरण शुरु गरेको छ ।
तीन दिन अघि(माघ ७ गते)देखि बोर्डले धरानमा दिन बिराएर पानी वितरण गर्न थालेको हो । बोर्डका अनुसार नयाँ संरचनाहरुको परिक्षण गर्न टेष्टिङ एण्ड कमिशनिङको काम भइरहेको कारण एक दिन विराएर खानेपानी वितरण गरिएको हो । टेष्टिङ र कमिशनिङको काम सकिएपछि नियमितरुपमा नै खानेपानी वितरण हुने पनि बोर्डले जारी गरेको सुचनामा उल्लेख छ ।
कार्यकारी निर्देशन राजु पोख्रेलका अनुसार फुस्रे सिस्टम सञ्चालन गर्न बाँकी रहेको छ । सञ्चालन गर्नुअघि टेष्ट गर्नुपर्ने भएकोले अहिलेको स्थिति आएको उनले बताए । म्याद सकिए पछि पनि पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदातालाई उपमहानगरपालिकाले आयोजनाको काम पुरा गर्न ल्याएको थियो । परामर्शदाताको म्याद अब मार्च महिनासम्म मात्र छ । त्यसैले अढाई महिनाभित्र आयोजनाको टेष्टिङ कार्य सकेर पुर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाब छ । ‘अरु सबै सिस्टमको टेष्टिङ सकियो, फुस्रे सिस्टम चलाउन बाँकी छ । कन्ट्याक्टरको म्याद बाँकी छ, तर कन्सल्टेन्टको मार्चसम्म मात्र छ,’पोख्रेलले भने ।
धरानको खानेपानी समस्या हल गर्ने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंक(एडिबि)को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो । आयोजनाको म्याद सकिए पनि पुर्णक्षमतामा पानी वितरण हुन सकेको छैन । आयोजना असफल भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यद्यपी, आयोजनाले भने लक्ष्य अनुसार नै पानी उत्पादन भइरहेको तर खानेपानी संस्थानको अवरोध र पुरानो संरचनाको कारण वितरणमा समस्या देखिएको जनाउदै आएको छ । संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व पनि अब बोर्डमा हस्तान्तरण भइसकेकोले पानी वितरणको जिम्मा बोर्डको रहेको छ ।
यो पनि: बर्षामा पनि धरानमा किन खानेपानी अभाव ? खानेपानी संस्थान र आयोजना प्रमुखको यस्तो छ जवाफ (भिडियोसहित)
यो पनि: धरानको फुस्रेमा बनेको फिल्टर प्लान्ट सञ्चालनमा आयो, उपभोक्तालाई शुद्ध खानेपानी पठाइने (भिडियोसहित)
यो पनि: खानेपानी आयोजनाको खर्च विवरण माग गर्दै संघर्ष समितिद्वारा धरान उपमहानगरपालिकामा ज्ञापन
यो पनि: खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टचार भएको भन्दै धरान उपमहानगरपालिका घेराउ (भिडियोसहित)
यो पनि: खानेपानी आयोजनाबारे धरानका मेयर भन्छन्,‘मलाई पनि आशंका छ, त्यसैले विज्ञबाट अध्ययन गराउदैछौं’ (भिडियोसहित)
यो पनि: धरानको खानेपानी आयोजनामा किन थपियो २ वटा वेल ? (भिडियोसहित)